Caalamka Online » Waxaaa Isbadal badan ka Muuqdo Amaanka Muqdisho iyo Ciidamo Boolis ah oo wadooyinka lagu arkayo Caaawa
Waxaaa Isbadal badan ka Muuqdo Amaanka Muqdisho iyo Ciidamo Boolis ah oo wadooyinka lagu arkayo Caaawa
Caawa ayaa waxaa Maxaagada Muqdisho lagu arkayaa Ciidamo cusub oo boolis ah kuwaas oo ku sugan inta badan wadooyinka waaweyn ee magaalada .
Ciidamadaan oo ka duwan kuwii hore ayaa waxaa u badan dhalinyaro aad u yar yar oo la sheegay iney badankood ka baxeen Jaamacadaha dalka, waxayna da’doodu u dhexeysaa 20 illaa 30 sano jir.
Goobaba ciidamadan lagu arkay ayaa waxaa ka mid ah Kontrolka lagu baaro gaadiidka ku sii jeeda garoonka Diyaarada Aadan cadde ee Magaalada Muqdisho,, isgoysyada ku yaala wadooyinka Maka Al-Mukarama, sida KM4 iyo KM5, iyo qaar ka mid ah Isgoysyada Mara wadada Wadnaha.
Ciidamadaaan ayaa waxaa ka muuqdo Anshax waxaana iyo ilaalinta sharciga waxaana la saadaalinayaa in ay wax badan ka badali doonaan Nidaamka Sharci ee hada ka jira wadooyinka Muqdisho oo ay joogi jireen askar inta badan balwad leh, dadka ayna jeclaysan.
Askartaan cusub ee tababarka soo dhameystay ee caawaba howlgaladooda ka bilaabay magaalada Muqdisho ayaa bedelay ciidamo ka tirsan ciidamada xasilinta oo horey u joogay goobaha caawa lagu arkay.
Xasan Cali Kheyre Ra’isul wasaaraha Soomaaliya ayaa danaynaya in ay xukuumadiisa wax badan ka qabato Falalka Amaan darada ee 10 kii sano ee udanbeeyay dalka ku sii xoogaysanaya, Falalkaas.